भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: June 2007
सरसफाई कति महत्वपुर्ण छ भन्ने कुरा रसुवाका यि कलिला नानीहरुलाई फोटो खिच्नको लागी मुख धुन लगाएको थिए, तेसैबाट देखिएको छ नि तिनको चम्किलो अनुहार ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 12:37 PM 1 comment:
छोरा छोरीले स्याहार सुसार गरेनन् भने देखी जति सुकै उमेर होस न कि आफ्नो हेर चाह आफै नै गर्नु पर्ने रछ भन्ने कुरा यि महिलाको हातमा रहेको दाउराले नै बताउछ ।
बुढो जीवन , दुखो जीवन भन्ने कुरा हामीले बेलैमा बुझेनौ भने फेरी पछि पछुताउनु बाहेक अरु बिकल्प पनि रहेन् ।
अनि विकासका थोत्रा मोत्रा कुरा गरेर मात्र हुन्छ र ?
आत्मसम्मान पुर्वक आत्मनिर्णयको अधिकार नै नेपालको बिकासको आधार हो भन्ने कुरा पनि यि अबोध महिलालाई देखेर हुन्छ नि ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 12:05 PM No comments:
पश्चिम नेपाल त्यो पनि त्रिशुल बाबाको प्रलय अगाडी पुग्दा कमसे कम बुटवल क्षेत्र बन्द थिएन ।
कहा जाने त एकदिन बुटवलमा ओर्लेर घुम्न। सम्भव थियो कि पाल्पा, लुम्बिनि वा भैरहवा हुदै सुनौली नाका एकै दिनमा ।
तर रोजियो सुनौली नै। गर्मीको तिब्र दबाबमा भैरहवा मेडिकल कलेजको पछाडीबाट रिक्सामा पुगियो नाका । ट्रकको चाङ , सायद बन्दको हल्लाको असरले होला, त्यो लामो लाईन थियो जसमा नेपाल भित्रिने क्रम जारी थियो ।
जस्ट नाकाको नाकमुख त देखियो , तर गर्मीले फर्कियो फेरि बुट्वल नै बेलुका। त्यहाको राम्रो होटेल आगनको आगनमा बेलुकीपख बित्यो शान्तपुर्वक।
मलाई लाग्यो पश्चिमको ईटहरी हो , बुटवल अनि उखरमाउलो गर्मी हुने भैरहवा चाही बिराटनगर । पाल्पा चाही धरान जस्तै होला शितल, तर त्यहा पुगिएन ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:14 AM No comments:
हेर्दै तुलहरुको चाङ लाएको धरान सहरको यात्रा गर्दा लाग्यो , यो घण्टाघरको शोभा बढेको छैन् ।
अनि भानुभक्तको उचाईमा मच्चेर गरिएका यि प्रचार सामग्रीको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा कस्को? बोल्नेको पिठो यसरी बिकाउने त !!!!!
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:28 AM No comments:
Sorry i didnt write to you I was just too busy.
Right now in the mountains again of course in Pakistan peple here are great
- imagine i lost my wallet with all money andaperson who found it brought it with everything!!!
The mountains are rally nice here and its muhc cheaper then Nepal will stay here for 3-4 days and go down to Afganistan border -acity called Peshawar then Islamabad and then if i get my visa - Iran.
Regarding the pictures - I wont be able to send it any time soon - the internet here is really slow - thats the only problem of this place :)
- the rest is great :)
And of course no map, no guide nothing
- only local people :)
Posted by Reality Bites, Nepal at 8:39 PM No comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 8:25 PM 1 comment:
धेरै पछि पुर्वको सहरहरु पुग्दालाग्यो, खोइ त राजाका मुर्तिहरु । सायद् अब राजा महत्वपुर्ण रहेनन् । तर पनि छैन् नि शान्ति । तर पनि इटहरीको यो चोक कति सुन्दर छ, अनि हाम्रो नेपाल पनि यस्तै सुन्दर बनाउने सपना नदेख्ने त !!
Posted by Reality Bites, Nepal at 8:17 PM No comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 5:22 AM No comments:
बेत्रावती ओर्लेर घुम्ने क्रममा देखिएको पानी घट्टको यो माथिको घुमिरहेको ढुङ्गा देखेर मलाई त्यसको तौल कति होला भन्ने कौतुहुल जाग्यो । पानीको बहाव र बेगले भन्ने हो भने त्यहा एक माइक्रोहाइड्रो राख्न गारो नहोला। किन कि मकै पिस्नको लागी त बिधुतिय मिल नै चलाउन सकिएला नि ।
जस्ट थिन्किङ् ओन्ली ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 4:47 AM No comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:56 AM No comments:
केन्जिङ गोम्बामा डि डि सी को चिज उत्पादन कारखानाले अबको समयमा हिउ कम पर्ने
भएर दैनिक ९० केजी चिज उत्पादन गर्नेछ जसको लागी ९०० लिटर दुध दिने चौरीहरु तेता त्यता घुमफिर गर्न थालीसकेका छन । चिज् बनाउदा नुनमा डुबाएर राखिने रहेछ केहि दिन, अनि त्यो ढिक्कोको मात्र दुई हजार ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 8:22 AM4comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:05 AM2comments:
जेष्ठ १९ गते लाङ्टाङ पुग्दाखेरी बाटोमा एक अपरिचित बिदेशीसँग गहिरो मित्रता भयो । त्यो पनि कसरी भने म र पारस लाङटाङको छोटो बाटो जादै थियौ तर खोइ किन हो हामी त ठुलो स्याफ्रुको बाटो पो लागेछौ।
थाहा भो हामी एक् घण्टाको बाटो बढी हिडेको, जब हामी पहिरो पुगेयौ । त्यही देखिएको पोल्याण्डको नागरिक हेनरीकसँग बम्बु पुग्दा नपुग्दै गहिरो मित्रता सुरु भो ।
दुइवटा बाटा फेरि देखेपछि हामी आतिदै उसलाई सोध्यौ
" अब कता जाने नि? "
उ हास्दै भन्छ " फलो द रिभर ! "
उसको कुरा सुनेर लाग्यो यो मान्छे हिमाल चढन सौखिन जस्तो लाग्यो हामीलाई ।
"अनि तपाईको गाइड नि?"
" दिस् म्याप ईज् माई गाइड।"
उसको कुरा सुनेर लाग्यो यो कन्जुस कुइरे हो ।
बुझ्दै जादा थाहा भो उ इन्डियामा बसेको एक बर्ष भएछ । यस अगि अफ्रिकामा तिन बर्ष बसेको उसको अनुभव छ । ( क्रमस: )
Posted by Reality Bites, Nepal at 6:49 AM 1 comment:
आखामा नजिकै टासिने लाङटाङ हिमालको तस्बिर लगभग ३९०० मी को उचाईमा रहेको क्यान्जिङबाट बिहानको चिसोमा खिच्दा कस्तो गारो भो होला ?
क्यन्जिन गुम्बा उपत्यकामा बसेको यो गेष्टहाउसमा बाहिरको सिसामा हिमाल टल्केको देखेपछि आखामा क्यामरा पर्यो र तस्बिर बसिहाल्यो मनमा पनि ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 10:06 AM 1 comment:
किन् किन यस्तो हिमाल देख्दा आजै चढु जस्तो लाग्छ , तर त्यो आङरिता शेर्पाको जस्तो आट पलाउछ कसरी?
Posted by Reality Bites, Nepal at 6:31 AM No comments:
झण्डै तिन् दिनको पदयात्रामा थकाई बिर्साउने यि हिम चुचुराहरुले मननै लोभ्याउछन किन् किन ।
केन्जिङ उपत्यकाको यस्तो मनोरम हिउ हेर्न र खेल्नको लागी बर्सौ लाग्दैन केवल नेपाली मन मात्र भए पुग्छ ।
Posted by Reality Bites, Nepal at 6:11 AM 1 comment: